Eventbrite: Ihe omume mere eme n'ezie | Martech Zone
Wednesday, April 9, 2008 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Emecha tọrọ ntọala na mbido 2006 na mpịakọta tiketi kwa ọnwa ekesara ka adịlarị nde na nde iri puku ndị ọrụ. Ahụrụ m nke mbụ Emecha òkù sitere na ihe omume nke Dr. Thomas Ho na m tinye n'ọrụ ya maka 3 ihe ugbua.
Ọ bụ ezie na dị ọcha, na interface bụ obere clunky. E nwere TON nke atụmatụ jupụtara na ngwa a ma nke ahụ bụ, obi abụọ adịghị ya, ihe ịma aka maka ịchọta menu dị mma na ebe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ihe niile ịchọrọ ime bụ ịgbakwunye ihe omume ngwa ngwa ma kpọọ mmadụ ole na ole, ọkachamara nwere ọmarịcha ọkwa 4 dị mma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nhọrọ ndị dị elu karị (nyocha, nyocha nke onwe, koodu ego), ị ga-achọ obere ike. Achọtara m enyemaka niile m chọrọ na faịlụ enyemaka ha, na mgbakwunye, ha nwere TON nke nkuzi nkuzi!
Ọ bụrụ n ’ị na-eche ihe kpatara na ị gaghị eme nke a n’onwe gị, enwere ụfọdụ ihe kpatara ya:
IMO, uru kasịnụ nke Eventbrite bụ na ị na-ebipụta mmemme gị na akpaghị aka Ihe omume evdb (Ihe omume na ebe nrụọrụ data). Nke a na-akwalite mmemme gị karịa oke nke ndị na - agụ akwụkwọ gị ma na - eme ka ọ nweta saịtị ndị ọzọ, dịka Na-abịa Yahoo.
Ihe ọzọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ na ịnye tiketi siri ike, nke a bụ isi ọwụwa ị na-achọghị ịnagide na nke gị! Eventbrite ọbụlagodi usoro nkwụghachi!
Enwere otutu ihe ndị ọzọ dị mma - edepụtara aha ndị ọbịa, ndepụta RSS na mmemme gị, Facebook mwekota, Paypal mwekota, Google ndenye ọpụpụ mwekota, a siri ike API, a usoro nke nanị na-ekwusara gị onwe gị omume na peeji nke, ihe Mgbakwunye mmemme… ị na-akpọ ya! Na, ị nwere ike idobe taabụ na mmepe ha site na Blogbido mmemme.
Lelee azụ gị, Eventbrite!
Njikere, ọ bụ ezie! M nwetara inyocha ụfọdụ Email Service Provider ngwa otu oge na TiketiMaster nọ na ngwakọta. Ọ bụ ezie na ha abụghị azụmahịa a kacha hụ n'anya nke ukwuu na ụlọ ọrụ tiketi, TicketMaster bụ mpaghara na oke iwe.
Amaghị m ogologo oge TicketMaster, ya na njikwa ya na ụlọ ọrụ na ụgwọ dị oke egwu, ga-eguzo ma hapụ nnukwu mmalite dị ka Eventbrite na-aga n'ihu na-eto eto na ihe ịga nke ọma! Ha nwere ike ha agaghị enwe ike ijide, ma ọ bụrụ na Eventbrite gara n'ihu na-agbanwe agbanwe!
Tags: njikwa ihe omumeihe omume n'elu ikpo okwuihe omume
Anọ m na-enyocha ihe a maka onye ahịa n'oge na-adịbeghị anya na ihe m na-ahụ na-amasị m. Ọ gbagwojuru eke ihe omenala.
M ga-egosi gị agbakwunyere, imezi peeji ebe m wuru omenala okirikiri nhọrọ ukwuu, Ian, ma ahịa monkeked na ha mere na agaghị m anara. 😉